Hamafisin’ny Lalàna Miaro Ny Tontolo iainana Ao Shina Ny Sazy Ho An’ireo Mpandoto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2014 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, srpski, 日本語, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Zavon-tsetroka ao Linfen, Shina. Tanàna tondroin'ireo fikambanana samihafa ho iray isan'ny tanàna faran'izay maloto indrindra manerana ny tany. Sary avy amin'i sheilaz413, mpampiasa Flickr. CC BY-NC-ND 2.0
Tsy hanarontsarona intsony ny sazy ara-bola natao ho an'ireo orinasa noho ny fandotoana i Shina ao anatin'ilay ezaka izay vaovao hiatrehana ny fepetra momba ny fahasimban'ny tontolo iainana, ao anatin'ny hatezerana tsy mitsaha-mitombo avy amin'ny vahoaka mikasika ny fihazakazaky ny fandotoana.
Ny hetsika farany izao dia voasoratra ao anatin'ny fanitsiana ny lalàna nasionaly momba ny tontolo iainana, izay nolanian'ny sampana mpanao lalàna tao amin'ny firenena tamin'ny herinandro lasa, taorian'ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny roa taona teo amin'ireo manampahaizana sy ny manampahefana. Ilay lalàna nasiam-panovàna momba ny tontolo iainana dia hiditra hanan-kery manomboka amin'ny 1 Janoary 2015. Tamin'ny 1989 no nolaniana ilay lalàna teo aloha.
Nohamafisin'ny fampahalalam-baovao Shinoa fa ireo fanovàna dia mametraka ilay lalàna vaovao momba ny tontolo iainana ho ny henjana indrindra tato anatin'ny 25 taona. Manome fahefana bebe kokoa an'ireo sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana hampiasa ny fahefana hanasazy ireo mpandoto matanjaka io lalàna vaovao io. Manome toky ny hiaro ireo “tsipika mena” ihany koa, ilazana ireo loharano sy tontolo voajanahary tandindonin-doza.
Afenin'ireo manampahefana ao ambadik'io sazy io ihany koa ny hoe mety hanome fahalalahana bebe kokoa ho an'ny isam-batan'olona ry zareo hanao fanenjehana araka ny lalàna raha mahita fanimbàna tontolo iainana, izay mbola mitoetra ho sehatra saropady mampifanditra ao Shina.
Ny firidandridan'ny firoboroboana ara-toekarena tao Shina dia narahan'ny fandotoana tafahoatra ny tontolo iainana, miaraka amin'ireo orinasa izay matetika tsy mety mampihatra ireo lalàna momba ny tontolo iainana. Ny fitomboany isan-taona manaraka tarehimarika roa tato anatin'ny taompolo telo lasa izao dia namadika ilay firenena ho lasa ny toekarena faharoa goavana indrindra eto amin'izao tontolo izao aorian'i Etazonia, saingy novidian-dafo ilay lasitra “fandrosoana amin'ny fomba rehetra”, ho an'ny rivotra iainana ao amin'ny firenena, ny rano sy ny tany, olana goavana ho anà vahoaka mahazo hery amin'ny media sosialy izay andefasan'izy ireo ny kaikitra ataony.
Ny fanovàna ny lalàna momba ny tontolo iainana ao Shina dia maneho ny filàna maika miatrika ny fandotoana satria mihodina ao anaty fahalotoana mihanaka be ny firenena. Tonga fotoana fohy taorian'ny namoahan'i Shina tatitra iray mampieritreritra izy ity, izay miaiky fa efa manakaiky ny ampahadimin'ny toeram-pambolena ao amin'ny firenena no voaloto.
Liu Meng, mpiasa iray ao amin'ny Firenena Mikambana misahana manokana an'i Shina, no nanazava ny dikan'ilay lalàna ho an'ireo ONG ao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy madinika Sina Weibo :
Noho ny “fiantraikan'ny PIB (harinkarena faobe)”, fahiny dia marobe ireo orinasa tena mpandoto no misitraka fiarovana avy amin'ny manampahefana ao an-toerana, sahirana mihitsy ireo ONG sy mpisolovava mpiaro tontolo iainana manenjika ireo orinasa mpandoto ireo. Ilay fanovàna vaovao dia manome lanja kokoa ny zon'ireo fikambanana sosialy hanenjika “ireo orinasa tena mpandoto”, araka izany dia hitàna anjara asa goavana be amin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ireo ONG ao Shina. Tato anatin'ny herinandro vitsy lasa, ny faritanin'i Hebei dia nanambara fa hametraka fandaharanasa hahafahan'ny daholobe handray anjara amin'ny fanaovana lalàna momba ny tontolo iainana, efa sava-làlana sahady io!
nanoratra tao amin'ny Weibo i Zhu Haijiu, mpampianatra haitoekarena, monina ao Zhejiang :
Ny antony fototra mitera-doza amin'ny tontolo iainana dia ny loza apetraky ny fampiharana ny lalàna, mampiseho ny fiharatsian'ny lalàna io.
Tany amboalohany tany, nolazain'i Zhu tamin'ny Ifeng.com fa lasa aloha loatra raha izao no hieritreritra ny fandrosoan'ilay fanavaozana :
Hanome fahefana be an'ireo manampahefana ho afaka hanasazy ireo orinasa mpandoto ilay fanavaozana, saingy mampiseho ny fandrosoany ve izany? Tsy dia izay raha ny hevitro. Tsy azontsika alahatra hitovy “ny sampan-draharaha matanjaka iray misahana ny tontolo iainana ” sy ny “fahaizana mitantana am-pahamendrehana ny tontolo iainana”. Ny olana dia goragora ny fampiharana ny lalàna ary tsy naraha-maso araka ny tokony ho izy, fanampin'izany ny tsy fananan'ny vahoaka fantsona iray ahafahany mitàna ho tompon'andraikitra ireo manampahefana ara-tontolo iainana. Vokany, raha mbola tsy vitantsika ny manamafy ny fepetra famaizana ireo manampahefana momba ny tontolo iainana fa tsy ny orinasa mpandoto fotsiny, tsy afaka hiteny isika hoe tena fandrosoana izany.
Tamin'ny fitsongoana orinasa iray miteraka fandotoana tao Foshan ao amin'ny faritain'i Guangdong, i “holdon2014″, mpampiasa Weibo, dia nanolotra fanehoan-kevitra iray somary fanalàna azy hoe:
Tonga ny fotoana azonareo hanangonam-bola! Tsy hisy fetra ny fotoana ahafahanareo manome lamandy (sazy ara-bola) ny orinasa laharana 1, Daoming, mpamokatra akora simika, ary dia ho tsara tokoa ny tamby isan-taona ho azonareo.